Understanding Basic Electrical Quantities (1) – NaingLinHan
July 13, 2016 November 2, 2016 /nainglinhan
ပထမဆုံး စံသတ်မှတ်ချက်က coulomb ပါ။ coulomb ကို electron အရေအတွက်နဲ့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ 1 coulomb မှာ 6.25 x 1018 (6,250,000,000,000,000,000) electron ရှိပါတယ်။ နားလည်လွယ်အောင်ပြောရင် တစ် ဂါလံ(1 Gallon) မှာပါတဲ့ ရေလိုမျိူးပေါ့။ ပါဝင်တဲ့ ပမာဏ ကို ဖော်ပြတာပါ။
သိပ္ပံပညာရှင် Coulomb ကို အစွဲပြုပြီး Unit ကို coulomb အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ Electrostatic charge ကို Coulomb က စမ်းသပ်လေ့လာပြီး Law အသစ်တစ်ခု ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ Coulomb’s Law of electrostatic charges လို့လူသိများပါတယ်။ Coulomb’s Law အရ လျှပ်စစ်ဆွဲအား သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်တွန်းအား က charge နှစ်ခုရဲ့ စွမ်းအားနဲ့တိုက်ရိုက် အချိူးကျပြီး သူတို့နှစ်ခုကြား အကွာအဝေး နှစ်ထပ် နဲ့ ပြောင်းပြန် အချိူးကျ ပါတယ်။ မြင်သာအောင် ပြောရရင် သံလိုက်နှစ်တုံးရဲ့ ဆွဲအားက သူတို့ရဲ့ သံလိုက်အားအပေါ် တိုက်ရိုက်အချိူးကျပြီး သူတို့ နှစ်ခုကြား အကွာအဝေးနဲ့ ပြောင်းပြန် အချိူးကျပါတယ်။ သံလိုက်နှစ်ခု အချင်းချင်း ဝေးသွားလေ သံလိုက်အား နည်းသွားလေပါပဲ။
နောက်ထက် လျှပ်စစ် အတိုင်းအတာ တစ်ခုက Ampere (amp) ပါ။ သိပ္ပံပညာရှင် Andre Ampere ကို အစွဲပြုလို့ Ampere လို့ခေါ်ပါတယ်။ တစ်စက္ကန့်မှာ ဖြတ်သွားတဲ့ 1 coulomb ပမာဏကို 1 amp လို့သတ်မှတ်ပါတယ်။ (1 Amp = 1 coulomb per second) ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင် water system တစ်ခုမှာ တစ်စက္ကန့် (သို့) တစ်မိနစ် အတွင်း ဖြတ်စီးသွားတဲ့ ရေတစ်ဂါလံ နဲ့ တူပါတယ်။ Current ရဲ့ သင်္ကေတမှာ I ဖြစ်ပြီး ယူနစ်အဖြစ် A (ampere) လို့သတ်မှတ်ပါတယ်။
One Ampere Equal One Coulomb Per Second.
Current in an Electrical Circuit can be compare to flow rate inaWater System.
ယနေ့ထိ လျှပ်စီးမှု(current flow) နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဒွိဟဖြစ်စရာ သီအိုရီ နှစ်ခုရှိပါတယ်။ ပထမ သီအိုရီက အခုပြောမယ့် electron theory ပါ။ ဒီ သီအိုရီမှာ electron တွေဟာ အမငုတ် ကနေ အဖိုငုတ်ကို စီးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Electron theory ကို အများက မှန်တယ်လို့ လက်ခံထားပါတယ်။
ဒါကတော့ ဒုတိယ သီအိုရီပါ။ ဒီ သီအိုရီက electron theory ထက်စောပြီးပေါ်ပါတယ်။ လျှပ်စစ်ဟာ အဖို ကနေ အမ ကို စီးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ Electron theory က မှန်နိုင်တယ်လို့ ယုံကြည်ကျပေမယ့် conventional current theory ကို တော်တော်များများ အသုံးချနေဆဲပါပဲ။ တော်တော်များများက အဖိုကြိုးကို အပူကြိုး၊ အမကြိုးကို အအေးကြိုးလို့ သတ်မှတ်ပြီး ပူရာကနေ အေးတဲ့ဆီကို စီးတယ်လို့ ယူဆကျပါတယ်။ Electrical field က လူတော်တော်များကလဲ ဒီသီအိုရီ ကိုအသုံးများပါတယ်။ Semiconductor symbol က တြိဂံရဲ့ မြားခေါင်းလေး အတိုင်းစီတယ်လို့ ယူဆကျပါတယ်။ Electron theory အရဆိုရင်တော့ မြားခေါင်းနဲ့ ပြောင်းပြန်စီးပါတယ်။ Schematic diagram အများစုမှာလဲ အဖိုကနေ အမသို့ သွားတယ်လို့ ယူဆ ရေးဆွဲကျခြင်းက ဒီသီအိုရီကို အသုံးများရတဲ့ အကြောင်းအရင်းတစ်ခုပါပဲ။ ပုံမှာကြည့်နိုင်ပါတယ် အပေါ်ကနေအောက် ကို စီးတာက အောင်ကနေအပေါ်ကို စီးတာထက် နားလည်ရ လွယ်စေပါတယ်။
Conventional Current Flow Theory & Electron Flow Theory
Schematic Diagram of On-Delay Timer.
ရှေ့က post မှာ current စီးတယ်ဆိုတာ electron တွေ atom တစ်လုံးကနေတစ်လုံး ရွေ့သွားတယ်လို့ ပြောပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Electron တစ်လုံးရဲ့ speed ကအရမ်းကိုနှေးပါတယ်။ ယေဘူယျအားဖြင့် တစ်နာရီမှ ၃လက်မပဲ ရွှေ့ပါတယ်။ ဒါဆို ဝိုင်ယာကြိုးတွေ မိုင်ထောင်ချီပြီး သွယ်ထားတော့ အရမ်းကြာရမှာပေါ့လို့ ဆိုဖွယ်ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီလို မဟုတ်ပါဘူး။ ပိုက်တစ်ခုထဲကို ပင်ပေါင်ဘောလုံးလေးတွေ အပြည့် ထည့်ထား တယ်လို့ မြင်ကြည့်ပါ။ အပြင်က နောက်ထက် ပင်ပေါင်ဘောလုံး တစ်လုံး ထည့်လိုက်တာနဲ့ ပိုက်ထဲက ဘောလုံးတစ်လုံး ထွက်ကျလာမှာပါ။ ဆိုတော့ electron တစ်လုံးရွေ့ဖို့ အချိန်ပဲကြာမှာပါ။ ဒါကြောင့် current ရဲ့ speed က အရမ်းမြန်ပါတယ်။ ဟိုးအရင် နှစ်တွေက current ရဲ့ speed ကို အလင်းရဲ့ speed 186,000 miles per second (300,000,000 meters per second) နဲ့ တူတယ်လို့ ယူဆခဲ့ပါတယ်။ မကြာသေးတဲ့ နှစ်တွေကမှ current ဟာ အလင်းထက် မြန်တယ်လို့ သက်သေပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာကြီးကို ဝိုင်ယာကြိုးနဲ့ ၁၀ပတ် ပတ်တယ်လို့ ယူဆကြည့်ပါ။ အစွန်းတစ်ဖက်မှာ ဘက်ထရီနဲ့ ခလုပ် တပ်ထားပြီး နောက်တစ်ဖက်မှာ မီးသီးတစ်လုံး တပ်ထားပါ။ ခလုပ်ကို ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ ချက်ချင်းဆိုသလို မီးလင်းတာတွေ့ရမှာပါ။ အလင်းက ကမ္ဘာကို ၁၀ပတ် ပတ်ဖို့ ခန့်မှန်းချေ ၁.၃ စက္ကန့်ကြာပါတယ်။
Electron Moving Atom to Atom
When A Ball is Pushed Into One End, Another Ball is Forced Out from Other End.
The Impulse Of Electricity Can Travel Faster than Light.
Categories: Electrical, General KnowledgeTags: Ampere, Conventional Current Theory, Coulomb, Electrical, Electron Theory, General Knowledge, Speed of Current
October 8, 2016 — 8:37 am
nainglinhan (Post author)
October 21, 2016 — 12:18 am
စာမေးပွဲနဲ့ ကျောင်း project ရှိလို့ ခဏရပ်ထားတာပါ .. အားရင်တော့ ရေးဖြစ်ပါတယ်..